Ukubika kweeNkampani kunye neendaba zeendaba
Imiba Uhambo loLwazi
by UTony Rogers
Ukuphuhlisa iindaba eziya ngaphaya kweeNgxelo
Kwintatheli elungileyo, amabali amaninzi kubalulekile ukubambisa - umlilo womlilo, ukubulala, ukhetho, uhlahlo lwabiwo-mali olutsha.
Kodwa kuthekani malunga neentsuku zeendaba ezicothayo xa uphulaphula iindaba kwaye zikho naluphi na ukukhutshwa kweendaba ezithandekayo ezifunekayo ukukhangela?
Leyo yimihla xa abathatheli abalungileyo besebenza kulokho abiza ngokuba "ngamabhankaso amabali." Ziyimiba yabaninzi abashicileli abafumana ukuvuyisa.
Iyintoni Ingxelo yokuShishino?
Ukubikwa kwamashishini kubandakanyeka amabali engekelwe kumaphephandaba okanye kwiinkomfa zeendaba. Kunoko, ingxelo yezoshishino nayo yonke ibali intatheli egqibhayo yakhe, ukuba yiyiphi abantu abaninzi ababizayo "bayangena." Ukubikwa kweentengiso kungaphelelanga nje ngokugubungela iziganeko. Ihlolisisa imikhosi ebumba ezo ziganeko.
Ngokomzekelo, sonke sivile amabali ngokukhunjulwa kwezinto eziphosakeleyo kwaye mhlawumbi iimveliso ezinobungozi ezinxulumene nabantwana abanjengo-cribs, amathoyizi kunye nezihlalo zeemoto. Kodwa xa iqela labanyathelisi e- Chicago Tribune lijonge kwizinto ezikhunjulwayo bafumanisa umzekelo wokunganyaniseki kolawulo lwezinto ezinjalo.
Ngokufanayo, umnyatheli weNew York Times uClifford J. Levy wenza uchungechunge lwamacandelo okuphanda afumene ukusetyenziswa kakubi kwabantu abadala abagula ngengqondo kwimimandla elawulwa ngumbuso. Ezi zombini iiprobune kunye namaxesha e-Times zanqoba i-Pulitzer.
Ukufumana Iingcamango zeeNkcazo zeeNkampani
Ngoko unokuhlakulela njani amabali amashishini?
Uninzi lwabalatheli baya kukuxelela ukuba ukufumanisa amabali anjalo kubandakanya izakhono ezibini ezibalulekileyo zengxelo: ukujonga nokuphanda.
Ukuqwalasela, ngokucacileyo kubandakanya ukubona ihlabathi elikujikelezile. Kodwa ngelixa sonke sibona izinto, abapapashi bathatha isinyathelo esinye ngokuqhubekayo ngokusebenzisa iimpendulo zabo ukuze bavelise iingcamango zamabali.
Ngamanye amazwi, intatheli obona into enomdla ngokuphantse ibuza yona, "ngaba ingaba ibali?"
Masithi uyeke kwisitishi segesi ukuze uzalise itanki yakho. Uyabona intengo yegolon yegesi ivukile kwakhona. Uninzi lwethu luya kukhubekisa ngalo, kodwa intatheli ingase ibuze, "Kutheni ixabiso liphakama?"
Nantsi umzekelo ongaphezulu: Ulapha kwisitolo sokuthenga kwaye uqaphele ukuba umculo wesiqalo ushintshile. Isitoreji esetyenziselwa ukudlala uhlobo lokulala okanye izinto ezingekho ngaphantsi kwama-70 eza kuvuya. Ngoku ivenkile idlala i-pop tunes kuma-1980s nakuma-1990. Kwakhona, uninzi lwethu lungaziboni ngolu hlobo, kodwa intatheli enhle yayibuza, "Kutheni batshintshe umculo?"
I-Ch-Ch-Ch-Changes, kunye neMithwalo
Phawula ukuba zombini imizekelo iquka utshintsho-kwintengo yegesi, kwimidlalo yangemuva edlalwa. Utshintsho yinto inokuthi ikhangele njalo. Utshintsho, emva koko, into entsha, kwaye uphuhliso olutsha yintoni abalobi beendaba abhala ngayo.
Abashicileli bezoshishino baphinde bajonga utshintsho olwenzeka ngexesha lemihla, ngamanye amagama. Ukufumanisa umkhwa ngokuqhelekileyo kuyindlela ebalulekileyo yokuqalisa ibali le shishini.
Kutheni Ucela Kutheni?
Uya kubona ukuba zombini imizekelo ibandakanya intatheli ebuza "kutheni" into eyenzekayo.
"Kutheni" mhlawumbi liyigama elibaluleke kunanoma yimuphi umyalezo wengxelo. Intatheli ebuza ukuba kutheni into eyenzekayo iqala isinyathelo esilandelayo sokubikwa kwezorhwebo: uphando.
Uphando ngokwenene nje ligama eliqingqiweyo lokunika ingxelo. Kuquka ukuqhuba udliwano-ndlebe kunye nokumba ulwazi malunga nokuphuhlisa ibali. Umsebenzi wokuqala we-intatheli yenzelwa ukunika ingxelo yokuqala ukuze kubone ukuba kukho ibali elincomekayo elibhalwa malunga (kungekhona yonke into ekhangayo eyenziwa ngamabali eendaba anomdla.) Isinyathelo esilandelayo kukuqokelela izinto ezifunekayo ukuvelisa ibali elomeleleyo.
Ngoko intatheli ephanda ukunyuka kwamaxabiso egesi ingayifumana ukuba iqhupho laseGulf of Mexico liye lanciphisa ukuveliswa kweoli, kubangela ukuba ixabiso lentengo. Kwaye umtshicili ovavanya ukutshintsha umculo wesiqhelo unokufumanisa ukuba yonke into malunga nabathengi bezinto ezinkulu kule mihla - abazali abanomntwana okhulayo - bebadala kwiminyaka ye-1980 kunye neye-1990 kwaye bafuna ukuva umculo owawuthandwa ebusheni bawo.
Umzekelo: Ibali malunga nokuNwa kwamanzi
Makhe sithathe omnye umzekelo, eli libandakanya umgangatho. Masithi ungumbiko wepolisa kwidolophu yakubo. Nsuku zonke uhlala kwikomkhulu lamapolisa, ukhangele igosa lokubanjwa. Ngethuba leenyanga eziliqela, uqaphela intonga ekubanjweni kokusela kwangaphantsi kwabafundi abasesikolweni esiphakamileyo sasekhaya.
Uphandulana neefoms ukuze ubone ukuba ukunyanzeliswa kokunyanzeliswa kukunyanzeliso. Bathi cha. Ngoko uxoxisana nenqununu yesikolo esiphakamileyo kunye nootitshala nabacebisi. Uyakuthetha nabafundi nabazali kwaye ufumene ukuba, ngenxa yezizathu ezininzi, ukusela kwangaphantsi kwexesha. Ngoko ubhala ibali malunga neengxaki zokusela kwangaphantsi kunye nendlela ekunyuka ngayo kwidolophu yakubo.
Into oye uyivelisa ibali lebhizinisi, enye ingekelwe kwisicatshulwa okanye inkomfa yeendaba, kodwa ngokuzijonga kunye nophando lwakho.
Ingxelo yoshishino ingabandakanya yonke into evela kumabali afanelekileyo (omnye malunga nokutshintsha umculo wesiqhelo uya kufanelana naloo mkhakha) kwiinqununu zokuphanda ezinzulu, njengalezo zikhankanywe ngentla nge-Tribune kunye namaxesha.
Indlela Eyona Ntle Yokuba Ngumthubi Ukufihla Intetho
Isipho samaFane ezemidlalo yamaFilly: iBill Lononline yeBlue Columnist Lyon ibuya
Nantsi indlela yokuKhusela i-Journalism Ukubetha ngokufanelekileyo
Nantsi Imbali emfutshane yoPapasho lwe-Journalism eMelika
Nazi iinqununu zokuqhuba ii-Interviews kwiindaba zeendaba
Iindaba ezili-10 zeendaba zeendaba zehlabathi ze-2012
Nazi iindlela ezigqwesileyo zokugubungela iintlobo ezahlukeneyo zeendaba ze-Live News
Iindlela 6 abaPhathi beeNkcazo bangaziphepha iingxabano zomdla
Iyini i-Journeyalism ye-Hyperlocal?
Funda Ukubhala Iindaba Zeendaba
Nantsi indlela abaTyathelisi banokufumana ngayo amaCwecwe alungileyo kwiindaba zabo zeendaba
Impembelelo yaseMexico: Umsebenzi waseVeracruz
I-Middle East Iimpawu zehlabathi laMandulo nelimihla
Biography yeMedgar Evers
Ngubani owasungula inaliti yensiza?
"Dlala i-Golf Designs" Uhambo lweeNgcaciso zeGalari
Indlela yokuMisa iNjini yeHinjini yeSixhobo
Ukubhala njani iinjongo ze-IEP
Ukudibanisa kuka-'Oír '
Iimpawu zeentliziyo kunye nokuqhutshwa kombane
Iintetho zeMculo ezi-9 eziPhambili zeRandi kunye neeRandi
Ukudibanisa no-Tiger Woods 'Uouse, Pro Golfer i-Cheyenne Woods
Iimviwo zeGesi yeGay-Lussac
Isikhokelo esilula kwiiNtsapho zeLizwi
Imisebenzi yamahlathi kunye neNgqesho
I-Italian-English Dictionary - Incwadi H
Ngaphambi Kokukhetha Umqeqeshi Wokukhwela Umzobo
I-Kostenki - Ubungqina bokufuduka kwabantu kwiYurophu
Black Oak, Umthi oqhelekileyo eNyakatho Melika
Umbono wamaSilamsi weMithetho elishumi
AbaPhathi kunye neParanormal: Ronald Reagan
Iyiphi intambo yeetekisi ezimbini?
JJ Thomson Inomic Theory kunye ne-Biography
Izipho eziMnandi zeMusic Class Christmas
I-Richest Rappers e-20 kwihlabathi
Yiyiphi i-Brutus eyayiba nguNyana kaKhesare?
Indlela yokusebenzisa iNgqamaniso yesiFrentshi eqhelekileyo 'I-Saur Sûr' ('ye-Course')